Amanqaku eTunio Zafer Martech Zone
Amanqaku ngu Tunio Zafer
UTunio Zafer yiCEO ye pCloud AG -inkampani ephuhlisayo kwaye ibonelele ngeqonga lokugcina ipCloud. Uneminyaka engaphezu kwe-18 yolawulo kunye namava entengiso kwinkalo yethekhnoloji, kwaye uthathe inxaxheba kwinani leeprojekthi zoshishino eziyimpumelelo ezifana neMTelekom, i-Host.bg, iGrabo.bg, i-Mobile Innovations JSC kunye nezinye. Njengenkokeli kunye nomphathi wenkampani yokugcina ifu, iTunio ikhuthaza ukutsha kwiindawo ezifana nokhuseleko kunye neendleko-ukusebenza kubasebenzisi bokugqibela. U-Tunio ukhuthaza ukucinga phambili kwiqela lakhe lonke, esebenza ukwenza impembelelo ebalulekileyo kwimarike ye-IT ekhula ngokukhawuleza, kubantu kunye namashishini ngokufanayo.
Iingqwalaselo ezi-5 xa ukhetha i-Cloud Storage ukunyusa iNtsebenziswano kunye neMveliso
NgoLwesithathu, Novemba 17, 2021 NgoLwesithathu, Novemba 17, 2021 Tunio Zafer
Ukukwazi ukugcina iifayile ezixabisekileyo ezinje ngeefoto, iividiyo kunye nomculo ngaphandle komthungo efini lithemba elinomtsalane, ngakumbi (ngokuthelekiswa) nenkumbulo encinci kwizixhobo eziphathwayo kunye neendleko eziphezulu zememori eyongezelelweyo. Kodwa kufuneka ujonge ntoni xa ukhetha ukugcinwa kwelifu kunye nesisombululo sokwabelana ngefayile? Apha, sichitha izinto ezintlanu wonke umntu ekufuneka aziqwalasele ngaphambi kokuba athathe isigqibo sokuba abeke phi idatha yakhe. Ulawulo – Ngaba ndilawula? Enye ye
Uphononongo lwabarhwebi kunye neeCEO ngaphezulu kwehlobo kwafumanisa ukuba ziipesenti ezintlanu kuphela ezingafumenanga zinto zilungileyo ebomini - kwaye akukho namnye umntu owathi basilele ukufunda into ngelo xesha. Kwaye kunye nemfuno eboniweyo yokuxhotyiswa kwemisebenzi yentengiso emva kokutshixwa kwentwasahlobo, kunjalo. Kwi-xPlora, ukuthengisa kunye ne-arhente yedijithali esekwe eSofia, eBulgaria, ukukwazi ukwabelana ngeefayile zoyilo